Ireo mpifanolo-bodirindrina dia nihevitra fa ny "batterie" izay miaraka tamin'ny "convertisseur" no nipoaka teo ampijerana sarimihetsika ; tsy nahitana soritra fahasimbana na dia kely aza anefa ireo fitaovana ireo fa ny vatan'ilay tovolahy efa nitsirara tamin'ny tany no hita.
Ny fianakaviana nilaza fa tsy mbola nahare karazana aretina mitaiza tamin'ilay tovolahy ; nanaitra azy ireo ny nahafaty tampoka ity tovolahy ity.
Voatery nodidina ny razana mba hahaizan'ny fianakaviana inona marina ny zavatra nipoaka tao amin'ilay tovolahy. Vita tamin'ny 11ora sy sasany ny fandidiana izay natao tao amin'ny tranom-paty CHRR Besopaka-Sambava. Mbola nijanona ho tsiambaratelo hatreto ny valin'ny fitiliana natao.